Sei uchisarudza SIUMAI kurongedza?
1. SIUMAI ine fekitori yayo, iyo yakavambwa muna 2002 uye yave ichiongorora muindasitiri yekudhinda uye kurongedza kwemakore makumi maviri.Tinogona kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mitengo yakakwana.Kukurukurirana kwakananga mufekitari kunogona kuve nechokwadi chekuti mataurirwo ese ndiwo anonyanya kushanda.
2. Iyo yekurongedza nzira inogadzirwa zvakasununguka, pasina chero saizi, mhando yebhokisi, uye zvinhu zvinorambidzwa.Ipa ese OEM, ODM masevhisi.
3. Kukurumidza proofing speed, digital samples, machine samples, pre-production samples, etc. inogona kupiwa.Kuve nechokwadi chekuti zvese zvese zvinogona kutaurwa uye kusimbiswa nevatengi.
4. Kuvimbiswa kwehutano, kusimba kwehutano hwehutano, chero zvigadzirwa zvakakanganisika hazvizopiwi kune vatengi.Kana paine chero matambudziko mukugadzira, iyo yemhando yekuongorora inogona kuve yekutanga nguva yekuziva.Iva 100% mutoro kune vatengi.
5. Chivimbiso chekutumira, SIUMAI inovimbisa kuendesa nenguva.Isu tinotevera musimboti webasa repamusoro-soro.Mushure mekurongerwa kurongeka kwekugadzirwa, isu ticharonga kugadzirwa kwezvinhu nekumhanya kwakanyanya kwesainzi.
6. Yakakwana mushure mekutengesa sevhisi, SIUMAI ine yakakwana mushure mekutengesa sevhisi system.Yedu yemhando yekuongorora uye kutengesa inonamatira kune yakanyanya hunyanzvi sevhisi maitiro kune yega yega odha, uye ramba uchibata 24 * 7 maawa.
Advanced tekinoroji, akawanda-mavara kudhinda, yakazara uye yunifomu pateni, yakanaka uye ine rupo.Zvemhando yepamusoro zvinhu zvakachena zvakachena, hazvina chepfu uye zvakachengeteka kushandisa.Tsigira kugadzirisa kuenzanisa kugadzirisa, fekitori yakananga kutengesa.
Kune mafaira anopiwa nemutengi, pakudhinda kwako kwakajeka, zvinokurudzirwa kushandisa vector mafomati akadai (AI, PDF, CDR).Kana pasina yakadaro faira fomati, unogona zvakare kupa yakakwira-resolution (300dpi) JPG, TIF mafaira efomati.
Vatengi vanogonawo kupa pfungwa dzavo uye zvigadzirwa kuti zviputirwe.Ticharonga vagadziri vehunyanzvi kuti vakupe madhizaini.Uye ipa digitaalinen samples yereferensi yevatengi.
Zvakapfuura: Medical yekuvhiya mask bhokisi mask yekuchengetera bhokisi mask bhokisi